Dhiraivha Inotarisirwa Traffic Kubatana Yekushambadzira Chirongwa
Amazon Prime Kiredhiti Kadhi
Zvese Zvikafu 5% Kudzoka
Maresitorendi, Nzvimbo dzeGesi uye Zvinodhaka 2% Kudzoka
Zvishandiso uye Rideshare 1% Kudzoka
Kwete Mari Yegore Negore
Hapana Mari dzekunze dzekunze
Isu tinowana komisheni kana iwe ukabaya iyi link uye woita kutenga pasina imwezve mari kwauri.
by Beverly Mudiki on July 21, 2021
Akasiyana Mhando Yekubatana Kushambadzira
Rosetta Dombo Dzidza Unlimited Mitauro | 12 Mwedzi - Dzidza 24 Mitauro | PC / Mac / iOS / Android Dhawunirodha
07/26/2021 11:00 am GMT
Izvo zvakanakira kushamwaridzana kushambadzira zviri kuwedzera pachena nhasi kupfuura zvekare. Ichi chiri pakati pechinhu chikuru chekukwezva kukuru kweanoshamwaridzana kushambadzira uye kushambadzira zvirongwa pakati pemazana mazhinji emakambani ekutengesa emambure.
Yakawanda yazvino internet tekinoroji yazvino yaita kuti zvive nyore kune vanobatana pamusika vatengesi kuti vawane dhata ravo uyezve mari yemamiriyoni miniti yavanotengesa kushamwaridzana. Parizvino zvinokwanisika kushandisa bhizinesi sePayPal yekugadzirisa pamwe nekubata invoice. Izvi zvanyatso cheka nguva iyo inoshamwaridzana pamusika mutengesi inoda kumirira kubhadhara kwake kuti kuunganidzwe kubva kune vatengesi.
Vaviri vanobatana uyezve vatengesi vane chaiko parizvino vanoziva kuti vanobatanidza kushambadzira kunoshanda kune vese vari vaviri. Vatengesi vanoona kushamwaridzana kushambadzira uye kushambadzira semukana wekushambadzira zvinhu zvavo nemutengo wakaderera. Kune rimwe divi rakasiyana, vanobatana vanoona kushamwaridzana kushambadzira uye kushambadzira senzira yakatwasuka yekuwana mari pa internet nekuita chimwe chinhu chavanonyanya kufarira, iko kutumira internet.
Zvakaenzana sekukwezva kwevanoshamwaridzana kushambadzira uye kushambadzira zvakanyatsopinda mukunyanyisa, saizvozvowo kutarisira kwevanhu kwakanyatso shandura kodzero maererano nekubatana kushambadzira uye kushambadzira. Batanidza kushambadzira hakuchina kufunga nezvayo senge yekuwedzera nzira yekushambadzira nevatengesi, kana seimwe mari yekuwana mari neanoshamwaridzana pamusika mutengesi. Kune vasonganiri uye zvakare vatengesi zvakafanana, kushamwaridzana kushambadzira parizvino kunotorwa mukufungidzirwa seyakakura sosi yemihoro uyezve mibairo.
Isu parizvino tinoda kuti tiongorore kuti rudzii rweshambadziro kushambadza runoshanda zvakanyanya kune chero mhando yemunhu? Kune here chero mhando yemisiyano muhukama kushambadzira zvirongwa?
Iko kune chaiko mitsara yekushamwaridzana kushambadzira, uye zvakare iwo marudzi anozoenderana chaizvo nemabatirwo auri kunyatso kuvekana ungavaziva ivo. Chikamu chakakosha chevashambadziro kushambadzira uye kushambadzira zvirongwa zvinodonha pasi pechipiri kusarudzika: kubhadhara-per-click (PPC), uye zvakare kubhadhara-per-performance (PPP).
Bhadhara Per Click (PPC) - PPC ndiyo inonyanya kuzivikanwa mhando yekushambadzira yevanoshamwaridzana nenzvimbo diki, pamwe ingangoita nzira yakapusa yekuti vaite mari. Mune iri kushamwaridzana rudzi rwekushambadzira, mutengesi anobhadhara shamwari yake pese panoshanyirwa saiti webhusaiti yake, ndipo pese panodzvanya munhu kuburikidza nemutengesi webanner kana kushambadzira meseji.
Bhadhara Per Performance (PPP) - PPP inoshambadzira kushambadzira kwakabudirira senge pakati pevatengesi uyezve iri irwo rudzi runogutsa kune vanobatana. Mune urwu rudzi rwechirongwa chekubatana, mutengesi anobhadhara mubatsiri kana kurudziro yake ikashanduka kuita chiito - ndipo pese panoshanya saiti iye anonyatsotenga chimwe chinhu kubva kune webhusaiti yevatengesi kana kana mushanyi wesaiti apedzisira ave mutungamiri. Kune rimwe divi rakasiyana, rudzi urwu rwevanoshamwaridzana kushambadzira hunopedzisira hwave hunogutsa zvakanyanya kune vakazvipira vanobatana, nekuti kubhadhara muPPP inoshambadzira kushambadzira uye kushambadzira kazhinji kunouya mumhando dzakasiyana dze15% kusvika 20% yeicho chaicho chinhu chekutengesa.
Kubhadhara-per-performance kushamwaridzana kushambadzira kunogona kutonyanya kuzivikanwa mumhando mbiri: bhadhara-per-kutengesa (PPS) pamwe nekubhadhara-per-lead (PPL). Ose aya akatanhamara.
a) Bhadhara Nekutengesa (PPS) - Mune yekubhadharisa-yega-yekutengesa mhando yevanoshamwaridzana kushambadzira, vatengesi vanobhadhara mubatsiri mumwe mutengo chero nguva mushanyi wesaiti iye zvaari akatsanangura webhusaiti yemutengesi achinyatsowana chimwe chinhu kubva kune webhusaiti yevatengesi. Vabatanidzwa vanowanzobhadharwa pamubhadharo, kunyangwe vamwe vatengesi vakasiyana vangazofunga kubhadhara muripo wakagadziriswa. Hazvina basa kuti hwaro hwemhosva huripi, inowanzo kuve muhombe kupfuura mutengo unobhadharwa kune vanobatana navo mubhadharo-per-tinya vanobatana chirongwa.
Mune urwu rudzi rweshambadziro inosangana, iye mubhadharo anobhadharwa pese panoshanyirwa saiti iye yaanoreva kune webhusaiti yevatengesi inotakura mhando yechikumbiro kana chero mhando yerudzi rwunoenzanirana inosangana nesangano rekambani. Kunze kweaya matatu akasarudzika marudzi eanoshambadzira kushambadzira uye kushambadzira, yakawanda yakawanda yemamwe marudzi ekubatanidza kushambadzira marudzi aripo. Kana chikamu chacho chakanangana nekudzika kwehukama hwehukama, inogona kuzivikanwa seyechete-tier, maviri-tier, pamwe neakawanda-tier anoshamwaridzana kushambadzira uye kushambadzira.
Single-Tier, Mbiri-Gumi, uye zvakare Multi-Tier Yakabatana Kushambadzira
Aya marudzi eanoshambadzira kushambadzira uye kushambadzira zvinovakirwa pamadhigirii akasiyana kana maitirwo muhukama hwehukama uko kudzoreredzwa kunoitwa.
A) Imwe Tier - Mune imwechete-tier inoshamwaridzana kushambadzira chirongwa, iwo mashamwari anongobhadharwa zvichibva pane yakatwasuka yekutengesa kana Website motokari akanyatsotsanangura mutengesi. Zvese zvaimbo nongedzwa kushamwaridzana kushambadzira uye kushambadzira mhando (kureva PPS, PPL, pamwe nePPC) kurasikirwa pasi peyechete-tier chikamu.
B) Chikamu chechipiri - Mune maviri-tier anoshamwaridzana ekushambadzira zvirongwa, vanobatana havangoshandisirwe yakananga webhusaiti traffic kana kutengesa kwaanopa iye webhusaiti webhusaiti, zvisinei zvinowedzera pane yega webhusaiti traffic kana kutengesa kunoendeswa nevamwe vakasiyana vamwe vakasainirana ne se-sub-yakabatana yeanoshamwaridzana pamusika mushambadzi.
C) Multi Tier - Multi-tier inoshamwaridzana inoshambadzira mabasa zvakafanana, kunyangwe musonganiri achiwana muripo wekuwedzera kune mamwe akawanda madhigirii evanoshamwaridzana mumitengo yakasiyana siyana mune inosangana network.
D) Inosara Yemari Inobatana Yekushambadzira - Mune iyi mhando, kuwedzera kune vanobatana anotambira mari kune wega mutengi iye akatsanangura chaizvo webhusaiti yevatengesi, mubatsiri anowedzerwa kubhadharwa chero nguva mutengi waanenge ataura anodzoka kune webhusaiti yevatengesi pamwe nekutora chimwe chinhu zvakare. Muripo wemhando yakadaro yevanoshambadzira kushambadzira inoenderana nechero muzana yezvekutengesa kana zvichibva pakuchengetwa kwemubhadharo.
Wese mushamarari wepamhepo mushambadzi anoona kuti idzi dzakasiyana dzekushambadzira nzira dzinoshanda nenzira dzakasiyana kune yega yega. Yakawanda mwero inoshambadzira kushambadzira, inowedzera inonzi Multi-Level Kushambadzira (MLM) iri mhando yakaoma kwazvo yekushambadzira kwewebhu uye zvakare haishande kune wese munhu. Muchokwadi, nyanzvi dzinozivikanwa dzekushambadzira dzinofunga nezveMLM seinorambidzwa kana chimwe chinhu chisingadiwe.
Anoshamwaridzana pamusika mushambadzi anoda kuyedza nzira dzakasiyana siyana uye kuona kuti ndedzipi dzinomushandira zvakanyanya. Iye / iye anofanirwa mushure meizvozvo atarise kune avo vanobatana ekushambadzira matekiniki ayo akakodzera iye / yake dhizaini yekambani yekutengesa yewebhu.
Kungofanana nekukwezva kwevanoshamwaridzana kushambadzira uye kushambadzira kwaenda chaiko mukunyanyisa, nenzira imwecheteyo tarisiro yevanhu yakashanduka kuita zvirinani zvakanyanya zvine chekuita nekusanganisa kushambadzira uye kushambadzira. Batanidza kushambadzira uye kushambadzira hakusisiri kufunga nezvayo senge yechipiri nzira yekushambadzira nevatengesi, kana seimwe yekuwedzera mibairo neanobatana neyekushambadzira nyanzvi. Kune vanobatana uye zvakare vatengesi zvakafanana, kushamwaridzana kushambadzira uye kushambadzira parizvino kunofungidzirwa nezve sosi yekutanga sosi yemari pamwe nemari.
Kune rimwe divi rakasiyana, rudzi urwu rwevanoshamwaridzana kushambadzira hunosvika pakuva hunogutsa kwazvo kune akazvipira mushamwaridzani, yemubhadharo muPPP inoshambadzira kushambadzira kazhinji inouya iripakati pe15% kusvika 20% yeiyo chaiyo yekutengesa chinhu. Kunze kweaya matatu mamwe marudzi eanoshambadzira kushambadzira, yakawanda yakawanda yemamwe marudzi ekushambadzira marudzi aripo.
Sony A80J 65 Inch TV: BRAVIA XR OLED 4K Ultra HD Smart Google TV neDolby Vision HDR uye Alexa Kuenderana XR65A80J- 2021 Model
07/26/2021 12:06 pm GMT
Mhepo Kurapa Sisitimu
Kudonhedza Shopify 2021
Kyng Inotakurika Solar jenareta
WordPress Yekutanga ya2021
Izvo Zvakanakisa Muhupenyu
Zvese Mune Imwe Mari
Yakavimbiswa Pasi Pasi Kirabhu
Hutano Uye Hutano
Dzimba Dziri Kutengeswa MuIllinois
Vaka Zvangu Zvinyorwa
Yemahara Salelist Mailer
Nyika yeArt Mailer
Traffic Inotungamira 2 Mari
VM Kubhadhara zuva
Iyo SEO Yekutarisa
Webhusaiti Traffic Hog
Mvura Kurapa System
WP Pamhepo Tsigiro
Zvemagariro Midhiya Disiki
Ndingangonanga Sei Traffic Ku Blog Rangu? Wakaona yako…
Iwo Ups Uye Downs Evaeni Blogging - Ziva Kubatsira Kwazvinoita ...
Dzakawanda Dzimwe Nzira dzeKutarisa Traffic KuWebhusaiti Yako
Unofanirwa Kutenga Inotarisirwa Traffic?
Target Traffic Kuburikidza neSocial Media
Kutungamira Matipi Mukutarisisa Traffic KuInternet Bhizinesi Yako…
Chii Chingaitwa neWordPress plugins Kukuitira Iwe?
Ari WordPress Matemplate Zvakaoma Kunzwisisa?
Ungaita Sei Kuti Uwedzere Traffic Kune Yako Webhusaiti Uchishandisa Traffic Shanduko
Inotarisirwa Traffic Ndicho Chakavanzika Chekutengesa Kwakanaka!
Maitiro Ekusarudza Anobatana Mabhanhire Kune Yako Saiti
Ini Ndinovavarira Sei Traffic KuBlog Yangu?
Dzimwe Nzira Dzinotarisa Traffic Kune Yako Webhusaiti
Maumbirwo Mahara Anonangwa Traffic
Kutungamira Matipi Ekutarisa Traffic KuInternet Bhizinesi Yako…
Targeted Traffic Maturu Kuako Akabatana Ekushambadzira Zvirongwa
Dzokera kumusoro peji
Copyright © 2021 · Copyblogger Yemwana theme on Genesis Framework · WordPress · Log in
Share musi LinkedIn
Govera pane Email
Share musi Reddit
Nakidzwa Izvo Zvakanyanya Muhupenyu - Zvigadzirwa Zvakachengeteka zvinoenderana neMararamiro Ako
Shandisa Zvishoma, Mitengo Yakaderera - Tsvaga Amazon Webhusaiti Zvino
Nekuramba uchiongorora saiti yauri kubvuma kushandisa kwedu kuki